जोएनेपाल | टन्सिल के हो, यसबाट कसरी बच्ने ?
टन्सिल के हो, यसबाट कसरी बच्ने ?
जोएनेपाल २०७७ माघ २९ गते बिहिबार, १०:५५ AM
मौसम परिवर्तनका बेलामा शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू र बालबालिकालाई टन्सिलले दुःख दिने गर्छ ।
टन्सिल के हो ?
घाँटीको प्रवेश बिन्दुमा दुइटा पिलरजस्ता ग्रन्थी हुन्छन्। यसलाई लिम्फ ग्रन्थी वा लिम्फ नोड पनि भनिन्छ। यसले कीटाणुविरुद्ध लडेर शरीरमा कीटाणुको प्रवेशलाई समेत रोक्ने काम गर्छ। तिनै ग्रन्थीहरू आफैंमा कीटाणुद्वारा संक्रमणको सिकार हुन सक्छन्।
यस्तो अवस्थामा ती फुलेर राता हुन्छन्। यदि ती टन्सिल भाइरसका कारणले फुलेका हुन् भने ती राता मात्रै हुन्छन्, तिनमा पीप जमेको हुँदैन। तर यदि ब्याक्टेरियाको कारणले हो भने सेतो पीपजस्तो पदार्थ पनि जमेको देखिन्छ।
- घाँटी दुख्ने र निल्न गाह्रो हुने हुन्छ।
- कहिलेकाहीँ कान पनि दुख्छ।
- ज्वरो आउने र जिउ दुख्ने पनि हुन्छ।
- ब्याक्टेरियाको संक्रमणले भएको टन्सिलमा रक्त परीक्षण गर्दा श्वेत कोषिकाहरूको संख्या बढेको पाइन्छ।
घाँटी दुखेको वा खानेकुरा निल्न गाह्रो भएको महसुस हुनेबित्तिकै नियमित नुन पानीले कुल्ला गर्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी चिसो, काँचो र कचिलो खानेकुरा खानु हुँदैन। चिसो र तातो सँगसँगै खानु हुँदैन। मुखको स्याहार, सरसफाइ र कुल्ला गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ।
टन्सिल भएपछि पहिले ब्याक्टेरियाले गर्दा हो कि भाइरसले भन्ने छुट्ट्याउनु पर्छ। यदि भाइरसका कारणले हो भने ज्वरो आए कम गर्न सिटामल खानुपर्छ। पानी प्रशस्त पिएर आराम गरेमा फाइदा पुग्छ । यदि ब्याक्टेरियाका कारणले टन्सिल भएको भए रगत जँचाएर एन्टिबायोटिक लिनु राम्रो हुन्छ।
पटकपटक टन्सिल भइरहे शल्यक्रिया गरेर यसलाई निकाल्नु नै उचित हुन्छ। वर्षमा तीन/चार पटक टन्सिल पाकिरह्यो भने यसलाई निकाल्नु पर्छ। दुई वर्षमा तीन पटकसम्म वा पाँच सात वर्षसम्म बर्सेनि टन्सिल पाकिरहे पनि यसलाई शल्यक्रियामार्फत झिकेर फ्याक्नु नै स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ।
क्षयरोग वा अन्य दीर्घकालीन रोगमा पनि टन्सिल बढ्न सक्छ। त्यसैगरी ल्युकेमियालगायतका रगतसम्बन्धी क्यान्सरका बिरामीलाई पनि टन्सिल बढिरहन सक्छ। त्यसैले टन्सिल त हो नि भनेर लापरबाही गरेर बस्नु हुँदैन। रोग लाग्नै नदिन सावधानी अपनाउने र लागेपछि चिकित्सकसँगको परामर्शमा उपचारमा लाग्नु जरुरी हुन्छ।
यसरी घरमै बनाउन सकिन्छ अनार र एलोभेराको 'हर्बल टोनर'
ढाड दुख्ने समस्या छ ? यसरी पाउन सकिन्छ छुटकारा
अध्ययन भन्छ : नियमित ध्यानले बढाउँछ यौन उर्जा
गर्भवती भएको कसरी थाहा पाउने ? देखिन्छन यस्ता लक्षण
किन पर्छ चाया ? यी हुन चाया हटाउने पाँच घरेलु उपाय
अध्ययन भन्छ : 'जगिंग' बिहानभन्दा साँझमा फाइदाजनक